Hollywood Vanity, Computer Desk, Kupfeka Tafura - Yifan
8 dhirowa Hollywood Vanity Mirror ine Mabumba uye Desk Seti Nhema Iyi Hollywood Glam Set ine zvese zvaunoda uye nezvimwe. Girazi rakajeka rinovhenekera uye girazi repamusoro tafura yekuratidza chero chinodiwa nemoyo wako. Girazi rinobata mwenje isingadzimiki uye madhirowa edhodhi apedzwa neakasarudzika madhaimani emastaira. Wedzera runako kune chero nzvimbo neiyi yakapusa asi inoshamisa dhizaini. Gadzira mumba mako yekurara kuti uwane yakazara glam ruzivo paunenge uchizora wega chako, pamwe nekureruka kwetambo yakazara ...
Iyi oval yakashongedzwa yemazuva ano zvisina maturo, inowirirana nechituru girazi inoratidzira yakajeka mitsara upholstery uye isina kujairika yegoridhe simbi makumbo. Yechokwadi chena machena marble pamusoro uye inoenderana oval girazi inoita iyi yakanaka isina maturo seti kumira kubva kune vamwe vese. Ichi chidimbu chinowoneka chinotaridzika zvakanaka mukamuri yako yekurara. Tarisa uone zvedu zvimwe zvidimbu kubva muunganidzwa uyu kuti utarise zvakarongeka. Iko kuvakwa kwesimbi, faux marble, huni hwakasimba uye PU dehwe rinovimbisa rutsigiro rwakasimba, kushandiswa kwakasimba uye ruzivo rwekunyaradza ...
Mazuva ano, zvisina maturo matafura ari kukwikwidzana neakakwira mutengo wemidziyo zvinhu zvine chekuita nemutengo. Hapana munhu achadzivirira imwe kuti uwane kana iwe uchikwanisa kushandisa zvekushongedza zvisina maturo. Kana iwe urikutsvaga zvisina maturo parizvino, ndinofara kuratidza sarudzo mbiri. Tenga girazi remadziro uye gadza chigaro uye zvakare yakanaka uye yakasununguka tafura yekudyira. Ndizvozvo kuti fungidziro yako isina maturo yave kuda kugara. Chechipiri, tenga yekuzora iyo ine shoma kuchengetedza kana kutenga mashoma epurasitiki midziyo uye ushandise iyo tog ...
Tsanangudzo NO. YF-D006 FEATURES 4 Dhirowa, 1 keyboard tray STYLE Chinyakare MATERIAL Melamine bhodhi TABLE DIMENSION 43.3 x 19.68 x 29.52 inches isu tinotsigira OEM yesaizi MIRROR INOSANGANISWA YES EBHOSITI ZVINODIWA WARRANTY 3 Year limited (pekugara), 1 Year limited (yezvokutengeserana) yakakwira gloss chena pamusoro kupedzisa chinhu chakakosha mukamuri revechidiki, hofisi yekumba, kana chero kupi kunoshanda nzvimbo yekushandira inodiwa. Iwe unogona zvakare kuisa iyi tafura mune yako yekurara, ...
Yemazuva ano kunyora kunyora tafura ine boo ...
Tsanangudzo NO. YF-D016 FEATURES 1 Dhirowa, 1 chipfuva nemusuwo STYLE yemazuva ano ZVINOKOSHA melamine bhodhi TABLE DIMENSION 120/140 / 160x60x75cm isu tinotsigira OEM yesaizi MIRROR INOSANGANISWA YES YESEMEMWE ZVINODIWA WARRANTY 3 Year limited (pekugara), 1 Year limited (yezvokutengeserana) Yakavakwa ne Kuchengeta mupfungwa, zvinokutendera iwe kuchengetedza kurongeka uye kurongeka muhofisi yako yekumba. Inoratidzira kudzamisa desktop, 50 / 60cm, iyo yakadzika kabhineti inogadzira imba yakanaka yeaya magwaro epachivande ...
White kunyora kudzidza kombiyuta dhesiki kumba offi ...
Tsanangudzo NO. YF-CD006 FEATURES 4 Dhirowa, 1 keyboard tray STYLE yemazuva ano MATERIAL melamine board TABLE DIMENSION 120x45x70cm isu tinotsigira OEM yesaizi MIRROR INCLUDED YES ASSEMBLY Inodikanwa WARRANTY 3 Year Limited (pekugara), 1 Year Limited (yezvokutengeserana) Ine 4 yakavhurika masherufu inopa nzvimbo yakakwana kuchengetedza zvigadzirwa zvemuhofisi, Mapepa, mafaira emafaira, uye zvimwe zvakawanda zvishongedzo zvidiki, Iyo 4-tier shefu Inogona kuiswa zvirinani kuruboshwe kana kurudyi kuruboshwe ...
YF-T10 Makuru Makeup Asina maturo neKuchengeta Masherufu ...
Tsananguro HAPANA YF-T10 ZVIMWE Kuchengetedza, Dhirowa, Inobvisika Mirror STYLE Luxury & Yemazuva Ano MATERIAL Yakakwira gloss MDF bhodhi + isina simbi makumbo TABLE DIMENSION 1200 * 500 * 750mm 1000 * 500 * 750mm isu tinotsigira OEM yehukuru MIRROR YAKASANGANISWA YES HURE KUSANGANISWA RINODIWA GWARITI Gore rechitatu. (pekugara), 1 Year Limited (vezvokutengeserana) EXW Mutengo: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (taura nevatengi service) Min.Order Quantity: 30Pieces Supply Mano: 10000 Piece / Pieces por Mon ...
YF-T3 izere netafura yemazuva ano yekupfeka tafura
Tsanangudzo NO. YF-T3 FEATURES Kuchengeta, Dhirowa, pafiripi yepamusoro girazi STYLE Luxury & Yemazuva ano MATERIAL Yakakwira gloss MDF, Goridhe yakanamatira simbi isina tsvina TABLE DIMENSION 900mmL x 400mmW x 750mmH 1000mmL x 400mmW x 750mmHwe rutsigiro OEM yesaizi MIRROR YAKASANGANISWA YESI KUSANGANISWA GORE RINODIWA GORE. (pekugara), 1 Year limited (vezvokutengeserana) EXW Mutengo: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (taura nevatengi service) Min.Order Quantity: 30Pieces Supply Mano: 10000 Piece / P ...
Tsanangudzo NO. YF-T2 FEATURES Kuchengetedza, Dhirowa, LED Mirror STYLE Luxury & Yemazuva ano MATERIAL Yakakwira gloss MDF, Goridhe yakanamatira simbi isina tsvina TABLE DIMENSION 800mmL x 400mmW x 750mmH 1000mmL x 400mmW x 750mmH 1200mmL x 400mmW x 750mmH isu tinotsigira OEM yesaizi MIRROR INOSIMBWA YES YES. Inodikanwa garandi 3 Year Yakatemwa (yekugara), 1 Year limited (yezvokutengeserana) EXW Mutengo: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (taura nevatengi service) Min.Order Quantity: 30Pieces Supply ...
YF-H-802-2 Dema Buffet Tafura 2 Masuo & 3 ...
Tsananguro HAPANA YF-H-802-2 ZVIMWE Masherufu, Dhirowa, Masuo STYLE Luxury & Yemazuva ano MATERIAL Yakakwira Gloss MDF bhodhi + Yakatsamwa girazi + yakaipisisa simbi isina tsvina TABLE DIMENSION 1200 / 1500mmL * 400mmW * 850mmH isu tinotsigira OEM yesaizi MIRROR YAKASIMBISWA YES YES MISANGANO Inodiwa. WARRANTY 3 Year Limited (pekugara), 1 Year limited (yezvokutengeserana) EXW Mutengo: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (taura nevatengi service) Min.Order Quantity: 30Pieces Supply Mano: 10000 Piece / Pieces per ...
YF-2001 Simudza-Epamusoro Tafura Tafura Inoshamisira Yo ...
Ichokwadi kuzita rayo, yedu yepakati-ezana ramakore-kufuridzirwa tafura yekofi ine pop-kumusoro kumusoro kuratidza yakavanzwa nzvimbo yekuchengetera. Kupera kwayo kweiyo walnut veneer kunowedzerwa nemashizha emarble kumusoro kune imwe nzvimbo yekuchengetera nzvimbo - yakakwana kumisikidza mabhuku panguva yekuungana kwako kunotevera. Simudza pamusoro pekuchengetedza tafura yekofi inopa kuwanda kwesitayera uye kuchengetedza kwenzvimbo yako yemazuva ano yekugara. Musanganiswa waro wakangwara wezvinhu unowedzera kubata kwekudziya pamwe nechitarisiko chakatsetseka kukamuri yako yekushongedza neyakareruka huni zviyo uye glos ...
YF-H-901 TV Mira 3-mudhirowa Media Mira neGor ...
Tsananguro HAPANA YF-H-901 ZVIMWE Zvidhirowa Zvinosanganisirwa, Kuvhura Kuchengetera, Cable Management STYLE Luxury & Yemazuva ano MATERIAL Yakakwira Gloss MDF bhodhi + Inopisa girazi TABLE DIMENSION 1830/2030 / 2230mmL * 400mmW * 420mmH + 1230 / 1360mmL * 600 / 700mmW * 400mmHwe rutsigiro OEM of the size MIRROR INCLUDED YES ASSEMBLY Inodikanwa WARRANTY 3 Year Limited (pekugara), 1 Year limited (vezvokutengeserana) EXW Mutengo: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (taura nevatengi service) Min.Order Yakawanda: 30Pieces Suppl ...
YF-H-211 Pink Velvet Nightstands 2 Dhirowa Wood ...
Tsananguro HAPANA YF-H-211 ZVIMWE Kuchengetedza, Dhirowa STYLE Yakawanda & Yemazuva Ano MATERIAL Yakakwira gloss MDF bhodhi + Velvet + Isimbi simbi gumbo TABLE DIMENSION 400mmL x 400mmW x 500mmHwe tsigiro OEM yesaizi MIRROR YAKASANGANISWA EHE KUSANGANISWA INODIWA WARRANTY 3 Year Limited (pekugara) , 1 Year limited (commercial) EXW Mutengo: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (taura nevatengi) Min.Order Quantity: 30Pieces Supply Mano: 10000 Piece / Pieces pamwedzi Port: Tianj ...
YF-H-206 Padivi Tafura neYoga Kuvhara Dhirowa La ...
Tsananguro HAPANA YF-H-206 ZVIMWE Kuchengetedza, Dhirowa, Girazi rakatsetseka STYLE Multifunctional & Yemazuva ano MATERIAL Yakakwira gloss MDF bhodhi + Isimbi simbi gumbo TABLE DIMENSION 420mmL x 420mmW x 420mmH 500mmL x 400mmW x 500mmHwe tsigiro OEM yesaizi MIRIRORI INOSANGANIDZWA YES WAREMBA 3 Year Limited (pekugara), 1 Year limited (yezvokutengeserana) EXW Mutengo: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (taura nevatengi service) Min.Order Quantity: 30Pieces Supply Mano: 10000 Pi ...
YF-H-201 Home Nightstand Side Tafura chena
Tsananguro HAPANA YF-H-201 ZVIMWE Kuchengeta, Dhirowa, Girazi rakatsiga STYLE Multifunctional & Yemazuva ano MATERIAL Yakakwira gloss MDF bhodhi + Stainless simbi gumbo TABLE DIMENSION 400mmL x 400mmW x 500mmHwe rutsigiro OEM yesaizi MIRROR YAKASANGANISWA YES EGUSI RINODIWA WARRANTY 3 Year Limited (pekugara. ), 1 Year limited (yezvokutengeserana) EXW Mutengo: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (taura nevatengi service) Min.Order Quantity: 30Pieces Supply Mano: 10000 Piece / Pieces pamwedzi Port ...
Zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa nezvakanakisa mbishi zvinhu. Yese nguva, isu tinogara tichivandudza chirongwa chekugadzira.
Zvigadzirwa zvedu zvine chitarisiko chakanaka, hunyanzvi hwekuita uye mhando yepamusoro.
mitengo inonzwisisika, inogutsa mushure-yekutengesa sevhisi, isu tinogamuchirawo iwe kuti ushanyire fekitori yedu chero nguva yaunoda.
Iwo Sideboard Sideboards anogona kuuya mune akateedzana masitayera uye ane akawanda akasiyana maficha. Iyo yemazuva ano-sideboard inowanzo kuve yakapfava uye inogona kuve nemakumbo akareba zvishoma pane echinyakare sideboard. Ikaiswa mukamuri yekutandarira, mativi emabhodhi anogona kushanda senzvimbo yekuvaraidza. Nekuda kwavo l ...
Ichokwadi nezve Matafura eKofi uye Nei Uchifanira Imwe
Isu tinogara tichiwana mibvunzo, uye chimwe chedu chakajairika ndechekuti iwe unoda tafura yekofi. Kumbira chero mugadziri wemukati uye ivo vachakuudza, shanda fomu rehwamanda mune zvese zviitiko. Nei uchigadzira kamuri yakanaka kana iwe usingazomboishandisa? Ndosaka zvichikosha kuratidza kuti unoshandisa sei s ...
Zvakakosha Midziyo Yemidziyo Yese Yekurara Zvinodiwa
Munzira dzakawanda, yekurara ndiyo inonyanya kukosha imba mune chero imba. Iyo inokubatsira iwe kuzorora uye kuzorodza mushure mezuva refu, uye dhizaini yeimba yako yekurara inofanira kuve nechinangwa chekugadzira nharaunda yakakodzera inokurudzira kurara. Kuisa mari mune chaiyo fanicha kunogona kukubatsira iwe kuita izvi uye kusimudzira mhando iyo ...
Hebei Yifan Wood Indasitiri iri muQuyangqiao, Zhengding County, inovhara nharaunda yemamirimita mazana matanhatu nemazana matanhatu. Tisati tatanga bhizinesi redu renyika dzese, Kubudirira kukuru kwakaitwa mumunda weTrade muChina Iyo fekitori ine yekucheka michina yekugadzira, magetsi ekucheka masaha, otomatiki matanhatu-akatsigira mabhureki, otomatiki emucheto mabhendi mabhendi anotengeswa kubva kuGerman uye zvimwe zvihombe . Isu tinotevedzera mutemo wenyika wekuchengetedza zvakatipoteredza uye tine tsvina tsvina maitirwo. MunaAugust 2019, nzvimbo yefekitori yakawedzerwa, uye iyo michina yakagadziriswazve.
Isu tinotarisa pakupa sevhisi kune vatengi vedu ...
Hunhu hwekutanga, Tekinoroji ndiBhisiki
Isu tinoseta yakasimba yemhando yekutonga system.